Yiziphi izinhlobo zezimboni ezipholisa umoya emishini yokupholisa izitshalo, namaphuzu wokufaka?
Phakathi kwemishini yokupholisa izitshalo, kunemininingwane eminingi namamodeli we-evaporative air coolers, amamodeli ahlukahlukene kanye nokucaciswa, ukusebenza kwezindleko eziphezulu emakethe yokuthengisa, kanye nezinhlobonhlobo zezicelo. Kuyimishini yokupholisa isitshalo enokukhetha okuphezulu.
Njengomkhiqizo webhizinisi elidala elineminyaka engu-13 yesipiliyoni somkhakha, i-Xikoo evaporative Air Cooler ihlukaniswa nomoya opholile kwimishini yokupholisa yesitshalo:
CoAxial flow evaporative air cooler: efanelekayo kumasayithi anamandla asebenzayo aphakathi nendawo nokugeleza okukhulu.
OlerCentrifugal evaporative air cooler: efanelekayo kumasayithi anomoya omncane wokukhipha umoya kanye nengcindezi yokusebenza ephezulu;
Isiphephetha-moya se-exhaNo-motor supercharged exhaust: Iqabunga elenziwe ngendlela efana ne-arc liqhutshwa umehluko womoya wegesi ongaphandle, ojikeleza nge-pivot, bese ukhipha ukuvikelwa kwemvelo kanye nemishini yokonga umoya yemvelo ngekhwalithi yomoya wasendlini ekahle.
Amaphuzu abalulekile wokufakwa okupholile komoya weXikoo:
SurfaceUbuso kufanele bulinganiswe ukugwema ukuvuza kwamanzi;
②Ukufakwa kwepholile yomoya ophahleni kumele kube ngaphezulu kunophahla oluyisicaba, futhi izikulufo zehange kufanele zifakwe ngaphakathi, futhi izikulufo zehange kufanele zihlonyelwe ama-washer entwasahlobo ukugwema ukukhululeka ngesikhathi sokufakwa;
Diameter Ububanzi bepayipi lokuphuma komoya abungeke bancishiswe, kepha benyuka kuphela. Inetha lokufiphaza kufanele lifakwe, futhi ikepisi lomoya nemvula kufanele kuphakanyiswe lapho umoya usinda;
Layer Isendlalelo sephedi yenjoloba yamamilimitha siphakanyiswa phakathi kwesisekelo se-evaporative air cooler nesisekelo sokunciphisa ukudlidliza;
⑤Imboni yomoya we-Xikoo evaporative air ixhunywe nomgudu wokungenisa umoya usebenzisa ithubhu eliguquguqukayo (impahla ethambile eluhlaza futhi engashiswanga), ubude akufanele bube ngaphansi kuka-200mm, futhi ububanzi bepayipi buyafana nokucaciswa kokungenisa nokuthekelisa kwezohwebo uphahla lomoya opholile. Ukuze kuqinisekiswe ukuthi i-hose ayibonakali iphazamisekile phakathi nenqubo yonke yokusebenza kwesoftware, kufanele ifakwe kahle. Okwe-white canvas hose efakwe ekugcineni kokudonsa kwe-Xikoo evaporative air cooler, ingafakwa iqine kancane ukuvimbela i-Xikoo evaporative air cooler ukuthi ingamunzwa ngesikhathi sokusebenza futhi inciphise ukucaciswa okuwela phakathi kwephosi elimhlophe le-canvas.
Isiqondisi esithile sobuchwepheshe se-Xikoo air cooler:
Isingeniso: Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, i-Xikoo evaporative air coolers inezimo ezithile zokushisa okuphezulu lapho isebenza ekamelweni lokushisa, kepha konke kungaphakathi kobubanzi obujwayelekile. Kungenxa yokuthi izingxenye zemishini ziyahlangana, okuholela ekukhiqizeni ukushisa nokushisa okuphezulu kwegobolondo. Kepha akusho ukuthi izinga lokushisa liphakeme kakhulu.
Ukupholisa umoya okuphefumulayo ukushisa kokuvalekile kwemishini yokupholisa isitshalo kudlula inani elijwayelekile. Izizathu ezisemqoka zingokulandelayo:
① Ingcindezi yokusebenza ephansi yokushintsha ukunikezwa kwamandla;
MotorImoto ayikho esigabeni sokuzivocavoca umzimba noma i-wiring ayilungile;
BearingUkugoqeleka kwemoto kubhujisiwe, futhi imvume yokubambisana mutwana incane, engahlangabezani nezidingo;
Ukumelana okungqubuzanayo kwesoftware yohlelo kukhulu kakhulu noma umoya opholile awufakiwe ngokwesayensi futhi imoto ilayishwe ngokweqile. Isizathu ukuthi i-coefficient yokumelana nenethiwekhi yamapayipi inkulu kakhulu noma i-valve yesango lenkomba yepayipi ayivuliwe.
Isikhathi Iposi: Nov-12-2020